समाज Archives - Pardarshita
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०३:३२९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०३:३२९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०३:३२ by PardarshitaNo Comments
जडीबुट्टीको रुपमा प्रयोग हुने केशरको बजार मूल्य हाल प्रतिकिलो दश लाख रहेको छ । विश्वका जडीबुटीहरुमा बहुमूल्यको सूचिमा रहेको केशर भित्रको लुर्काको सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । एउटा फूलमा १० देखि १५ मिलिग्राम केशर प्राप्त हुन्छ । नेपालमा वार्षिक ७ देखि १० किलोसम्म केशर उत्पादन हुने गरेको छ । मूल्यवान केशर इलाममा गतसाल सुरु गरिएको थियो । हालमा यसले उत्पादन दिन थालेको छ । माईजोगमाई गाउँपालिकामा यसको व्यवसायिक उत्पादनको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । सो पालिकाको जौबारी मल्टी पर्पोज एग्रीकल्चर एण्ड इन्भाइरोमेण्ट सेण्टरले केशरको खेती गत सालबाट सुरु गरेको थियो । यही कात्तिक ५ गते बुधबार दोस्रो पटक उत्पादित केशरको फूल संकलन गरिएको छ ।केशर खेतीका लागि १५०० देखि २५०० मिटरको उचाई उपयुक्त मानिन्छ । यसका साथै सामान्य हिमपात हुने र तुषारो पर्ने मौसम यसका लागि उपयुक्त मानिन्छ । बालीको सुरुवात असोज महिनामा हुन्...
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०४:५६४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०४:५६४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०४:५६ by Pardarshita1 Comment
विर्तामोड,झापा भनिन्छ एउटा कुकुरलाई तपाईले नियमित ७ दिन खाना खुवाउनु भयो भने कुकुरले तपाईलाई चिनेर पुच्छर हल्लाउछ । उसले तपाईलाई चाडै विश्वास गर्छ । तपाइलाई उसले महान सम्झन्छ । सबै मानिसहरुमा तपाइको सहयोग सम्झन्छ । तर सबै मानिसहरुको व्यहार समान हुदैन । तपाई सडकमा सुतेका एवम् खुट्टा खोच्याउदै हिडेका कुकुर एवम् पशुहरु देखेर कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? कसैले खाते कुकुर भन्दै लखेट्छन त कोही खानुकुरा दिएर प्रेम देखाउछन् । यी सबै व्यवहार मानिस अनुसार फरक पर्दछ । कसैले घरमा पालेको कुकुरलाई मात्र माया गर्दछ त कोहीले सबैलाई । यी सबै मानविय भावनाहरु हुन । झापामा सडक दुर्घटनाका घटनाहरु नियमित घट्छन । दुर्घटना निम्त्याउने एउटा कारणमा सडकका पशुहरु पनि पर्दछन् । खानाको खोजीमा यताउता हिड्ने क्रममा यस्तो दुर्घटना हुने गर्दछ । यी पशुहरुको उचीत व्यवस्थापन नहुदा पशु अधिकारसगै मानव सुर...
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:१८२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:१८२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:१८ by PardarshitaNo Comments
टेलिकम एप पहिलोपटक डाउनलोड गर्नेलाई ५०० एमबी डाटा निःशुल्क
Image www.pngtree.com नेपाल टेलिकमले दशै तिहार जस्तो चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विभिन्न अफरहरु ल्याउने गरेका छ । यो वडा दशैमा पनि विशेष अफरहरु ल्याएको छ । दशै अफरमा असोज १ गते घटस्थापना देखि लागु हुने प्याकेज ल्याएको छ । तिहार अफर चाहि कागतिहार देखि छठसम्म लागु हुनेछ । त्यसैगरी अटम अफरको रुपमा ३ दिनका लागि रु ५५ मा युटुब अनलिमिटेड र फेसबुक अनलिमिटेड अफर ल्याएको छ । यी अफरहरु लिनेलाई थप सुविधा स्वरुप १ जीबि डाटा प्याक रु १५ मा उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी रु ४० मा ७० मिनेटको भ्वाइस प्याक अफर ल्याएको छ ।त्यस्तै घटस्थापना देखि टेलिकम एप पहिलोपटक डाउनलोड गर्नेलाई ५०० एमबी डाटा एकपटकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । ह्याप्पी लर्निङ प्याक मा मानिसहरुको बढ्दो चासोलाई ध्यानमा राखि यो सेवा सबै ग्राहकका लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिस बिना उपलब्ध गराउने गरी सेवा सुरु गरेको छ । ...
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:२७१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:२७१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:२७ by PardarshitaNo Comments
२०७७ बडा दशैँको टीकाको साइत सार्वजनिक
Breaking News, मुख्य समाचार, समाज
नेपाल पञ्चाङ्ग निणार्यक समितिले वि.सं. २०७७ सालको बडा दशैँको टीकाको साइत बिहान १०ः१९ बजे रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।यस वर्ष घटस्थापना कात्तिक १ गते शनिबार परेको छ । बिहान ११ः४६ मा घटस्थापनाको लागि उपयुक्त समय रहेको छ । बिहान १०ः११ बजे देवी विसर्जनको समय रहेकोे नेपाल पञ्चाङ्ग निणार्यक समितिले बताएको छ । ...
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०५:२११३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०५:२११३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०५:२१ by PardarshitaNo Comments
सक्षम बालिका, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ १ नं. प्रदेश भरिका बालिकाहरुलाई सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ नगर बाल सञ्जाल दमकको आयोजना र दमक नगरपालिकाको समन्वयमा असोज २४ र २५ गते बालिका सम्मेलन, २०७७ आयोजना हुने भएकाे छ ।बालिकाका अवस्था, बालिका विरुद्धका हिंसा, लकडाउनमा बालिका साथै सो बाट बच्ने उपायहरु, कानुनी प्रावधान, राष्ट्रका नीतिहरुका बारेमा विभिन्न वक्ताहरु एवं भिडियो प्रस्तुति मार्फत जानकारी दिने साथै बालिकाका जिज्ञाशा भए सो निराकरण समेत गर्ने प्रयास लिदै भर्चुअल कार्यक्रम हुने तय भएको छ । कार्यक्रमले बालिकाहरुलाई बाल दुर्व्यवहार, बाल विवाह, सामाजिक विकृति, अन्धविश्वास लयायत विषयमा समेत सचेत गराउदै सक्षम बनाउने आशा लिएको छ । यस कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का १० देखी १८ वर्षसम्मका बालिकाहरु सहभागी हुन सक्नेछन् । सो कार्यक्रम उक्त मितिमा दिनको ११ बजे बाट हुनेछ । कार्यक्रममा सहभ...
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०४:५०१३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०४:५०१३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०४:५० by PardarshitaNo Comments
कमल गाउँपालिकामा बन्यो ५ बेडको अस्थाइ कोभिड अस्पताल
Breaking News, समाज, स्थानिय निकाय, स्वास्थ्य
प्रदेश नं.१ का माननीय मन्त्री श्री हिक्मत कार्की बाट ५ बेडको अस्थाइ कोभिड अस्पतालको कमल गाउँपालिकामा सोमबार उद्घाटन भएको छ । कमल गाउँपालिकाले निर्माण गरेको यस अस्पतालमा सोहि दिनबाट क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन संचालनमा आएको छ । असोज ११ गते सम्ममा ११२५ जनाको पिसिआर टेस्ट गरिएको छ भने पोजिटिभ संख्या ५० रहेको छ । ४८ जना निको भैसकेका ,१ जनाको उपचार जारी रहेकाे र १ जनाको मृत्यु भएको छ । ...